Software Muqaal for Windows 8
> Resource > Windows > Software Muqaal for Windows 8: Samee adiga kuu gaar ah iyo Muqaal
Cod iyo Muqaal waa mid ka mid ah ilaha aad u fiican in ay dib ugu soo celin xasuus ee la soo dhaafay ka hor indhahaaga. Haddii aad doonaysaan inaad hesho xasuus yaab noloshaada, ka dibna la abuuro slideshow khaas ah waa doorashada ugu fiican ee loogu talagalay in. Haddaba DVD Slideshow Builder Deluxe - a software slideshow daaqado 8 , waxaad si fudud u samayn kartaa slideshow ah oo leh waxyaabo gaar ah. By isticmaalaya software slideshow, xataa qofka caadiga ah abuuri kara duubey fiican ka sawir sawirada iyaga oo aan wax aqoon ah sawir.
Halkan waxaan ku arki doonaa sida loo sameeyo slideshow la this software slideshow daaqado 8 talaabo talaabo ah. Just raaci tip iyo abuuro duubey dhalaalayay siday damcaan aad.
1 files Add to software slideshow this
Ka dib markii socda DVD Slideshow Builder Deluxe, aad arki doonaa waxa jira laba hababka: Mode Standard iyo Advanced Mode. Standard Mode aad u saamaxaaya in ay qaado style a pre-loogu tala galay ka badan oo isla nooleyn sawiro aad; halka Advanced Mode bixisaa doorashada dheeraad ah si aad u shakhsiyeeyo duubey leh noocyada kala duwan ee kala guurka laga cabsado, saamaynta, noocyada iyo ka badan. Halkan aynu qaadan Advance Mode sida tusaale ahaan.
In la abaabulo tab, bilaabaan samaynta aad slideshow gaar ah adigoo gujinaya "Add Files" button. Markaas dajiyaan photos videos ama si aad u storyboard ka your computer. Waxaad laab laabi karo guji warbaahinta bartilmaameedka iyo edit in daaqadaha pop up ah.
2 shakhsiyeeyo slideshow ah
Software slideshow waxay bixinaysaa doorashooyin badan in lagu daro saameynta kala duwan si ay sawiro iyo mawduucyada aad. Tusaale ahaan, waxaad ku dari kartaa dari music soo jeeda ee "shakhsiyeeyo" tab adigoo gujinaya "Music" button. Waxaa kale oo ay leedahay tirada dhisay-in-guurka ee il-qabad sida 3D, Alpha, libdhi, Slide oo siman, ECT. Just xulo kala guurka sida aad jeceshahay. Markaas riix "Intro / Credit" suulka ku darto Intro ama Credit in aad slideshow sida ay mawduuca.
3 Save slideshow ama wadaagaan online
Haddaba tag in "Abuur" tab, oo ku eegaan aad slideshow. Haddii aad ku qanacsan tahay, shuqullada, dooranayaan ah bidixda si uu u badbaadiyo slideshow sida file deegaanka. Waxa kale oo aad si toos ah u gali kartaa slideshow in ay Youtube ama gubi in DVD ilaalinta.
Imminka mar haddii aad martay nidaam dhan oo ay slideshow ah, kaliya download software slideshow this daaqado 8 oo aad u bilowdo!